Nhau - MunaGunyana naGumiguru, iyo VP yeDhipatimendi reTechnology yakatungamira timu yeR & D kuita Corona virus antigen kit kit.
Munguva yaGunyana naGumiguru, iyo VP yeTechnology department rakatungamira timu yeR & D kuita Corona virus antigen test kit.
Munguva yaGunyana naGumiguru, iyo VP yeTechnology department rakatungamira timu yeR & D kuita Corona virus antigen test kit. Muna Gumiguru 26, Iyo Silk Road International Cooperation Working Committee (SRIC) yakaita musangano wechipiri wevhidhiyo nevatungamiriri veMadrid (Spain), ichitarisa kuenderera mberi kwekudyidzana kwenyika dzepasirese. VaRamon, Sachigaro weSpanish Enterprise Confederation; Mr.Victor, Mutungamiriri weMadrid Investment Promotion Hofisi muChina; Mr.
Daniel, MIA Advisor wezve hupfumi weMadrid Municipal Kunze Kwekutengeserana Hofisi; Mr. Meng Lingwen, CEO weGaobeidian PRISES Biotechnology Co, Ltd., nevamwe vamiririri vakapinda musangano wevhidhiyo. Pamusangano, VaRamon vakaunza Spanish Enterprise Confederation inova sangano rine chiremera rinomiririra nhengo dzaro uye rinoita sebhiriji pakati pemabhizinesi eLatin America neEuropean; kune anopfuura mazana maviri enhengo nhengo dzinoshumira chinangwa chayo pakuchengetedza zvakazara zvido zvemabhizinesi eSpanish uye vanoumba chinzvimbo chekubatana nevekunze nekune dzimwe nyika maindasitiri ebasa repamusoro, vachipa masevhisi ehunyanzvi. SRIC inogara ichironga misangano yekutaurirana kwemaindasitiri kusimudzira kuchinjana pakati pevanamuzvinabhizimusi nekukurukura budiriro pamwe chete. SRIC inotarisa kumakambani epamberi eEuropean ekugadzira uye ekurapa michina, uye inogona kupa makambani kunyatso kumhara nekumisikidza masevhisi, achiwedzera zvirimo zveprojekti, achipa kutamba kuzere kune zvakanakira zvigadzirwa zvepuratifomu, kuita zvimwe zvibudiriro, uye kubudirira kune kuhwina-kuhwina mhedzisiro. yemapato ese.
Pa2021, Chivabvu 13 kusvika 16, kambani yakatora chikamu che84th China International Medical Equipment Fair (CMEF) muShanghai (National Convention uye Exhibition Center), iyo Booth Number: 62Q42 yakamirira iwe!